သက်တန့်ချို: ကျောက်ကပ်ထဲမှာ stone ၄၂၁ ခုကို အသက်ခြောက်ဆယ်အရွယ် အမျိုးသမီးဆီမှ ဖယ်ထုတ်ခဲ့ရခြင်း
ကျောက်ကပ်ထဲမှာ stone ၄၂၁ ခုကို အသက်ခြောက်ဆယ်အရွယ် အမျိုးသမီးဆီမှ ဖယ်ထုတ်ခဲ့ရခြင်း
ထိုင်းဆရာဝန်တွေဟာ အသက်၆၀ အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆီမှ ကျောက်ကပ် stone ၄၂၁ ခုကို ခွဲစိတ်ဖယ် ထုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ် ။ သူမဟာ ဆေးရုံလာစဉ်က အစာအိမ်နာတယ်ဆိုပြီးရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ Nong Khai ပြည်နယ်မှ Somdej Phraupharajthabo ဆေးရုံမှ ဒါရိုက်တာ Dr.Wattana Parisri ဟာ လူနာဆီကနေ သူနဲ့ သူ့ရဲ့ လက်ထောက်တွေပူးပေါင်းပြီး ကျောက်ကပ်ထဲက ကျောက်တည်တာတွေကို အောင်မြင်စွာ ဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Thai Rath newspaper ကဖော်ပြထားပါတယ် ။
လူနာဟာ ဆေးခန်းပေါင်းများစွာကို အစာအိမ်အောင့်တယ်ဆိုပြီး ခဏခဏ ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ဆီး လမ်းကြောင်း ပြဿနာတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် Ultrasound မှာကတော့အ နာကြောင့်ဖြစ် တယ်ဆို ပြီး မှားယွင်းပြီး ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် အခုလို ဖြစ်ခဲ့ရတာပါလို့ Wattana ကပြောခဲ့ပါတယ် ။
လူတစ်ယောက်မှာ ဆေးပညာ မှတ်တမ်းတွေထဲမှာရော ဒါဟာ ကျောက်ကပ်ထဲ stone တွေရှိနေတာ ဒီတစ်ကြိမ် ဟာ အများဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ သူက ထပ်ပြောခဲ့ပါတယ် ။ ဆရာဝန်တွေ ရဲ့ပြောဆိုမှုအ ရ ကျောက်ကပ် ထဲ ကျောက်တည်ခြင်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ ပိုအဖြစ်များပြီး အဲဒီဖက်ကပဲ ပိုပြီးလာပြလေ့ ရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါဟာ အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်စေ မျိုးဗီဇ geneitic proclivity ကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
Posted by သက်တန့်ချို at 12:07 PM
နန်းသက် November 29, 2011 at 5:05 AM
အာရိုရို.... တခါမှမကြားဖူးတဲ့ဖြစ်ရပ်ပဲ. အပ်ထရာဆောင်းရိုက်တာကလဲအဖြေမှားထွက်တယ်တဲ့. ကံကောင်းလို့ လူနာကကြားထဲကအသက်မဆုံးရှုံးတာပေါ့။
အလင်းသစ် December 1, 2011 at 4:35 AM
ဒီဘက်ခေတ်ရောက်ကာမှ ရောဂါတွေလည်း များလာပေါလာလိုက်တာ... (၉၆)ပါးဆိုတာ ကတောင်ကပါတော့မလားမသိပါဘူး...။။။
ကျောက်ကပ်ထဲမှာ stone ၄၂၁ ခုကို အသက်ခြောက်ဆယ်အရွယ် ...
နှစ်ပတ်ကြာ စိုက်ဝင်နေတဲ့မြှားကို ခွဲစိတ်ပြီးထုတ်ပေ...
ငှက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေသွားရတဲ့လူ
မိန်းမ ၃၉ ယောက်နဲ့ အာဂ လူသား
တောင်ကြီးမြို့ ထမ်စမ်းဂူ သို့အလည်တစ်ခေါက်
နတ်သမီး (သို့မဟုတ်) အဖြူရောင် အလင်းပွင့် ရစ်သမ်မျာ...
ညီမလေးဖတ်ဖို့ ( အပိုင်း ၈)
အဝေးရောက် . . .
ကြက်မျက်သင့်ရောဂါ သို့မဟုတ် ညဖက် အမှောင်မမြင်ရခြင်...